मनसुन सुरू तर सुदूरपश्चिममा सम्भावित विपद् राेक्न पूर्वतयारीकाे आफ्नै स्राेतको तथ्यांक समेत छैन
बुधबार, असार २२ २०७९ ०६:२३ PM
बुधबार २५ जेठ २०७९ ०२:१७ PM
धनगढी - यस बर्षको मनसुन सुरु भइसक्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मनसुनका कारण हुनसक्ने विपद् नियन्त्रण र उद्धारसम्बन्धी पूर्वतयारी सुरु गरेकाे छैन । गत कार्तिकमा सुदूरपश्चिममा आएको बेमौसमी वर्षाका कारण ठुलो क्षेति भएको थियो । वर्षाका कारण अर्बौको भौतिक संरचनामा क्षेति हुँनुकाे साथै ३३ भन्दा बढीले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका थिए । जसकाे प्रमुख कारण सरकारकाे पूर्वतयारी अभाव नै हाे ।
यस बर्ष पनि मनसुन भित्रिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीमा चासो समेत देखाएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप वेश्राका अनुसार विपद् पूर्व तयारीका बारेमा अहिलेसम्म सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । तर, कसरी काम गर्ने, स्राेतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद्पछि उद्धारका लागि के कति स्राेत साधान छ भन्ने समेत एकिन तथ्यांक छैन । सो तथ्यांक स्थानीय तहसँग माग गरेकाे भए पनि उपलब्ध नभएको उपसचिव वेश्राले बताए ।
उनले तत्कालै प्रकोप सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वतयारीका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी संघसंस्थासँग सहकार्य भइरहेको बताए । मर्सीकोर, आइओएनलगायत अन्तराष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा पूर्वतयारी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सचेतना कार्यक्रममा विपदबाट बच्न के–के गर्ने ? सावधानीका उपाय कसरी अपनाउने ? विपद आइहाले कसरी सुरक्षित बन्ने ? भन्ने बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराइने उनले बताए । प्रदेश सरकारले नदीमा पानीको वहाव मापन गर्ने 'रेनगेज'को सूचना दिने स्वयंसेवकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत बताए ।